Tuesday October 13, 2020 - 17:50:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadankada Afghanistan ayaa sheegaya in weeraro culus ay lakulmeen dhowr saldhig oo ay ciidamada xukuumadda taakta daran ku lahaayeen Koonfurta wadankaasi.
Ciidamada Imaarada Islaamiga ah ayaa qaaday olole dagaaleed ballaaran oo ay ku beegsanayaan ciidamada cadowga ee ku sugan gobolka Helmand.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliban ayaa lagu sheegay in inkabadan 40 askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarada.
Dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeymo xagga cirka ah ay uga qeyb qaadatay dagaallada ka socda Afghanistan.
Milatariga Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in ciidamadooda ay fuliyeen dhowr weerar oo ka dhan ah Taalibaan si ay u taageeraan ciidamada dowlada dabadhilifka Afghanistan xili dagaallo culus ay ka socdeen koonfurta gobolka Helmand.
Afhayeen u hadlay ciidanka Mareykanka oo lagu magacaabo Kornayl Sonny Leggett ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay weerareen dagaalyahanno katirsan Talibaan oo ku sugan gobolka Helmand si ay u difaacaan ciidamada huwanta ah ee Afghanistan ku sugan.
"Daalibaan waa in ay si deg deg ah u joojiso falalka gurracan ee ay ka wado Gobolka Helmand oo ay yareyso rabshadaha ay ka wado dalka. Maahan mid waafaqsan heshiiska Mareykanka iyo Daalibaan waxayna wiiqaysaa wadahadallada nabadeed ee Afgaanistaan ka socda, ”ayaa lagu yiri qoraa uu soo saaray Jeneral Scott Miller oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan.
Wariyaal ayaa soo sheegay in duqeymahan xagga cirka ah ee Mareykanku ku qaaday Taliban ay yihiin kuwa naadir ah tan iyo markii labada dhinac bishii Maarso ee lasoo dhaafay ay heshiis xabad joojin ah ku kala saxiixdeen magaalada Dooxa ee dalka Qadar.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin Hoggaanka Imaarada Islaamiga ah oo ku saabsan weerarkan uga yimid dhanka Mareykanka.